Orinasa sy mpanamboatra China Agarose | HQG
Agarose dia polymer linear izay ny firafitra fototra dia rojo lava misy ny 1, 3-mifandray β-D-galactose ary 1, 4-mifandray 3, 6-anhydro-α-L-galactose. Matetika ny agarose dia levona anaty rano rehefa mafana hatramin'ny 90 ℃, ary lasa gel semi-solid tsara rehefa midina hatramin'ny 35-40 ℃ ny maripana, izay ny endri-javatra sy fototry ny fampiasana azy marobe. Ny fananan'ny gel agarose dia matetika maneho amin'ny tanjaka gel. Arakaraka ny maha avo ny tanjaka no mahatsara ny fahombiazan'ny gel.
Ny agarose madio dia matetika ampiasaina ao amin'ny laboratoara biokimia ho fanohanana semi-solid amin'ny electrophoresis, chromatography ary teknolojia hafa amin'ny fisarahana sy famakafakana biomolecules na molekiola kely.
Ny agra-gel electrophoresis dia matetika ampiasaina hanamoriana sy hamantarana asidra niokleika, toy ny famantarana ny ADN, ny famerana ny ADN ny famerana ny sarintany sy ny sisa. Noho ny fiasa mety aminy, ny fitaovana tsotra, ny haben'ny santionany ary ny vahaolana avo lenta, io fomba io dia nanjary iray amin'ireo fomba fanandramana ampiasaina matetika amin'ny fikarohana injeniera momba ny genetika.
Ny tanjaky ny gel: ≥1200g / cm² （1.0% gel）
Temperature gelling: 36.5 ± 1 ℃ （1.5 gel）
Temperature miempo: 88.0 ± 1 ℃ （1.5 gel）
Previous: Agent manazava labiera
Manaraka: Bacteriological Agar